Zvakanakira nekuipira chimwe nepachinko yaiitirwa kuchinja reshiyo
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira chimwe nepachinko yaiitirwa kuchinja reshiyo
Kana ukaenda kuna nepachinko uye slots, kutanga ndinofunga kuti ndicho kutendeuka nhamba mwoyo. Common ari nepachinko yokumusoro, kuwanda bhora apo vanokweretesawo vatengi, mumwe 4 Yen, rava rimwe 20 Yen menduru. Mumakore achangopfuura, Ichipachi uye 5 Yen slots, nezvimwewo, asi izvozvo akabuda kunyange yakaderera chikwereti bhora, kutendeuka reshiyo panguva mari bhora uye Medals rakapa Chero zvazvingava, akava wakanaka chinhu pachena pakutsvaga mumwe nepachinko yokumusoro une.
mari zvazvingava, chinhu chinokosha zvikuru kuziva anodawo mitemo nokuda nepachinko parlors. In
, pamatunhu-cashing zvitoro uye kuderedzwa cashing chitoro, ndakagadza muenzaniso uye kurwa divi, nezvimwewo, tinoda kuona kworudzii musiyano pamusoro. Sezvo mutengi, ndinofunga chokwadi nevanhu yakakwirira mari inonaka, chokwadi kuti kutsiva payout yako iri refu kutendeutsa reshiyo, nokuti shop, pasina zvimwe zvipo vachatitaka asisiri vanofanira.
kubva mugumisiro chakaipa mabhizimisi, chipikiri zvakafanira tightening zvinoodza, marongero inowanzopiwa uyewo crap zvose-1. Kunyange apo zviitiko, uye akazarura guru zvipikiri kumusoro uko, kunoitawo zviome kuwedzera zvenguva ezvinhu, ndoda refu ezvinhu. Nepachinko yokumusoro wemupristi mari, kana vasina zvishoma, handigoni ribviswe hanya kudaro pakarepo kuva dhefisiti.
Muchidimbu, nekuti zvakaoma chaizvo kuratidza payout, kana iwe tarira vatengi edu, uyewo ndinofunga vazhinji kuti haana kusiya Toka kutendeuka. Saka, muna nepachinko yokumusoro venzvimbo mari, tinowanzoona tenga kuti kunyanya kumisa muenzaniso zhinji inonzi mukuru-spec. Big raparadza fungidziro zvakakwirira, mari iri kutarisirwa zvikuru mari.
Zvisinei, kunyange kana ukatarira kurutivi mutengi, mukuru-spec mukuru-cashing chitoro, zvinotisvitsa guru takunda Kana bhora nyika. Nepachinko yokumusoro dzakakwirira ravakadzikunurwa, uyewo kuwedzera mari yakawandisa zvishoma, chokwadi, mukana kuhwina mukana kuti akatangazve, kukwirira iwe. Pachine, dambudziko guru abatsire kumusoro mari. Runokunda anoziva, kana raparadza, ari kuti zviri nani kurwa nokure ari nepachinko yokumusoro mukuru mari.
ndiEzekieri, yakaderera-cashing chitoro, kazhinji Kuti chipikiri unoitwa inotapira kubva zvakare, zvingava kana pane zvenguva yakatarwa ari slots. Sezvo kumhanya ari vawane, dzakanga mukana wokuswedera makuru corners. Zvisinei, kunyange sezvo vakawanda payout ari kuunganidza, zvichienderana mari mari, imi vo chokwadi kuti Unobata mashoma. In yakadaro pasi mari yose nepachinko yaiitirwa, mutambo nyore kuti muenzaniso iyo anonzi dzakanaka digitaalinen uye pakati mhando Specs, avanotarisira yokugadza vazhinji vachava kwirirei.
, kana kuti uchida kuswedera makuru raparadza, asi nepachinko yokumusoro yakaderera mari inokurudzirwa, ndinofunga kuti zvakaoma zvikuru kuti kuhwina guru. In mukuru mari muchitoro, mumwe takunda guru anonzi mutengi akamuka ini kuravidza kusangana, ari pasi-cashing chitoro, kunoratidzwa kudanwa mutengi akabvunza kuti kuravidza pakati enhancement nezvaunoitawo chinhu.
Nenzira iyi, kutendeuka reshiyo riri kukonzerwa kusiyana sei kutamba, iwe zvitoro hwakachinjawo kusarudza.
noenderana kuchinjanisa, simba nechigadziko rurefu kutendeuka nhamba kuchitoro, ndiye akakodzera kuti tinovavarira chete panguva mbambo nguva zvakanaka nguva. Achideredza kutendeuka reshiyo, asi ari muitiro yose vekupedzisira, vakawanda zvakadai somunhu zvenguva marongero, vanowanzoyemura muAtlantic akanga simbe. Time hakusi maturo zvikuru pasinei nokutambura, zvichava sezvinoita - kuti ndive bytes zuva vashandi. Nokuda musiyano pakati runako divi, uyewo akachinja muchitoro kusarudza.
noenderana kuchinjanisa, simba nechigadziko rurefu kutendeuka nhamba kuchitoro, ndiye akakodzera kuti tinovavarira chete panguva mbambo nguva zvakanaka nguva. Achideredza kutendeuka reshiyo, asi ari muitiro yose vekupedzisira, vakawanda zvakadai somunhu zvenguva marongero, vanowanzoyemura muAtlantic akanga simbe. Time hakusi maturo zvikuru pasinei nokutambura, zvichava sezvinoita - kuti ndive bytes zuva vashandi.